Apple waxay soo saartay dakhli ka badan kan Android rubuc | Wararka IPhone
Apple ayaa dakhli ka badan rubuc ka badan Google tan iyo markii la bilaabay Android
Alexander Cabrera | | Tartanka, Alaabada Apple
La Muranka u dhexeeya Oracle iyo Google ayaa muujinaya macluumaad qarsoodi ah ku saabsan shirkadahan. Horaa loo muujiyay Google ayaa Apple siisa lacag dhan bilyan doolar laga soo bilaabo 2014 si Google loogu sii hayo bixiyaha raadinta asalka ah ee Safari ee iOS, iyo sidoo kale heshiis dakhli wadaag ah oo Google ay ku siiso Apple qayb muhiim ah oo ka mid ah dakhliga raadinta xayeysiiska iPhone.
Qareenka Oracle ayaa sidoo kale sheegay in Google ay soo saartay $ 22 bilyan oo faa'iido ah iyo $ 31 bilyan oo dakhli ah oo ka soo gala Android tan iyo markii la bilaabay. In kasta oo tirooyin kasta oo balaayiin ah ay yihiin kuwo cajiib ah, haddana waa la barbardhigaa marka la barbar dhigo fikradda moobiilka ee Apple. Sida Quartz ay muujineyso, Apple waxay soo saartay dakhli badan oo iPhone ah rubuc rubuc, oo kor u qaadaya $ 32 bilyan oo iibka iPhone-ka ah laga bilaabo Luulyo ilaa Sebtember.
Sida iska cad, waxaa jira cinwaano qaar oo sharraxaya farqiga weyn. Khaas ahaan, Google fursad uma haysato inay iska iibiso qalabkeeda. Ku dhowaad dhammaan dakhliga Android waxaa laga soo qaatay Google Play Store oo ku saabsan saamiga dakhliga horumariyaha (sida Apple, Google wuxuu leeyahay kala-goyn 70/30) ama xayeysiis lagu soo bandhigo taleefannada Google. Ganacsiga guuleystay ee Qalabka Apple wuxuu ku fiican yahay bixinta darafyada sare, oo marba marka ka dambaysa ay soo kordhaan faa iidooyin badan
Sidaa darteed, in kasta oo shaxdani ka astaan ​​badan tahay wax kasta oo kale, haddana waa muhiim in la muujiyo Guusha Apple ee iPhone-ka guud ahaan. Xusuusnow in Apple iyo Samsung ay yihiin soosaarayaasha kaliya ee lacagta ka sameeya taleefannada casriga ah. Qof kastaa wuxuu si joogto ah u lumiyaa lacag. Khataraha la xiriira ganacsiga qalabka qalabka ayaa badanaa la iska indhatiraa, laakiin Apple waxay guraneysaa abaalmarinta guusheeda.
Xitaa adoo fiirinaya tirooyinka iibka softiweerka, Apple wuxuu kudhowyahay nambarada Google. Apple ayaa hore u shaacisay in App Store ay u soo uruuriyeen $ 40 billion horumariyeyaasha. Taasi waxay ka dhigan tahay tan Apple wuxuu soo saaraa ugu yaraan $ 12 bilyan oo dakhli ah oo ka soo gala App Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Apple ayaa dakhli ka badan rubuc ka badan Google tan iyo markii la bilaabay Android
Taasina waxay ka dhigeysaa kuwa isticmaala boggan inay ku faanaan in summadoodu ay wax badan soo gasho oo ay ku dallacaan wax badan oo ka mid ah adeegyadooda iyo qalabkooda !!! dareenkaas ii daa qoraalkan
Waxaad leedahay fikirka caadiga ah ee Android ee ku wajahan adeegsadayaasha Apple: in aan kaa raaligelinno nooc si nidaamsan noo khiyaameeyay.
Apple way sii joogi kartaa dusha sare, inkasta oo tartanku jiro, iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta joogtada ah ee alaabteeda iyo horumarintani waxay kaliya suurtogal u tahay dakhliga ay soo saarto. Isticmaalayaasha Apple waxay bixiyaan waxa aan bixino si aan u ilaalino sumadda na siisa waxa aan dooneyno. Ma garanayo waxa ka khaldan taas.
Waxay u egtahay in la yiraahdo waxaan ahay doqon maxaa yeelay waxaan sii wadaa inaan ka iibsado alaabada sumadaha dukaamada halkii aan ka iibsan lahaa noocyada gaarka loo leeyahay ee Mercadona ama Carrefourt ("waa isku mid waana ka raqiisan", sida ay yiraahdaan). Ciddii u aragta inay isku mid tahay, waa inay iibsadaan, laakiin waa inaynaan ka leexan kuwa naga mid ah ee doonaya alaab tayo sare leh.
Kuwani waa Emojis cusub oo aad ka heli lahayd macruufka 10
App Store oo leh qiimo dhimis ku saabsan barnaamijyada wax soosaarka